Nokia 6.1 သည် Android Pie ၏တည်ငြိမ်သော version ကိုရရှိသည် Androidsis
HMD Global Product Director ဖြစ်သူ Juho Sarvikas က၎င်းကိုကြေငြာခဲ့သည် Nokia 6.1 အတွက် Android Pie Update ကိုစတင်မိတ်ဆက်။ အဆိုပါကြေငြာချက်ကိုမကြာသေးမီကတွစ်တာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
El Nokia က 6.1 Plus အား ၎င်းသည် Android Pie ၏ beta version ကိုမကြာသေးမီကရရှိခဲ့ပြီး Nokia 6.1 သည် Android Oreo တွင်ဆက်လက်ရှိနေခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဖုန်းအတွက် beta ပရိုဂရမ်မရှိကြောင်းနှင့်တိုက်ရိုက် update တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီနေ့ ဖင်လန်ကသူမ၏ကတိတော်ကိုစောင့်ထိန်းပြီး update ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်.
သင့်တွင် Nokia 6.1 ရှိပါကအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုကိုယ်တိုင်မှတဆင့်စစ်ဆေးရမည် setting များကို o configuration ကို. အရွယ်အစားမှာ 1462.6 MB ဖြစ်သည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပြောင်းအလဲသည်အပြောင်းအလဲဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူများ၏အသုံးများဆုံးအသုံးချပရိုဂရမ်များ / ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အလိုက်ဘက်ထရီပါဝါ ဦး စားပေး
အသုံးပြုသူအသစ်၊ ဂူဂဲလ်မှန်ဘီလူးနှင့်ဂူဂဲလ်လှုပ်ရှားမှုအသစ်တို့ပါဝင်သောကင်မရာ v9.0 အသစ်
Nokia 6.1 အသုံးပြုသူများအတွက် mr ။ Sarvikas ကပြောကြားရာတွင် Android Pie update သည်လာမည့်လ ၂၄ နာရီထက်နည်းသော်လည်းယခုလမကုန်မီရရှိသင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်၊ မွမ်းမံမှုများသည်များသောအားဖြင့်ဒေသအားလုံးတွင်တူညီမှုမရှိကြောင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့သည်တည်နေရာမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူအချို့ဖုန်းများသို့အနှေးနှင့်အမြန်ရောက်ရှိလေ့ရှိကြောင်းသတိရပါ။ ဒီတော့ သငျသညျဆိုင်းငံ့နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခံရဖို့ရှိသည်.
ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ Nokia 6.1 ကိုဇန်နဝါရီလတွင်ကြေညာခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် ၅.၅ လက်မ FullHD မျက်နှာပြင်၊ Qualcomm Snapdragon 5.5 ပရိုဆက်ဆာ၊ 630GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှု 4GB အထိရှိသည်။ နောက်ကင်မရာ 64-megapixel၊ selfies နှင့်အခြားများအတွက် 16-megapixel ရှေ့အာရုံခံကိရိယာ, နောက်ဘက်တပ်ဆင်ထားသည့်လက်ဗွေစကင်နာနှင့် 8 mAh ဘက်ထရီတို့ပါ ၀ င်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Nokia 6.1 သုံးစွဲသူများအတွက်သတင်းကောင်း - Android9Pie ကိုယခုဖုန်းတွင်ရရှိနိုင်သည်